ပဲပုတ်ငရုတ်သီးအကြွပ်ကြော် ~ သဘာဝရဲ့အာဟာရ
ငရုတ်ကြန်းမှုန်. ................၁ ဇွန်း( ထမင်းစားဇွန်း)
ဆား၊ အချိုမှုန်. ................သင့်ရုံ
ပဲပုတ်တွေကို အလျားလက်မ၀က် အနံ၁စင်တီမီတာအပိုင်းများဖြစ်အောင်ကပ်ကြေးနဲ.ညှပ်ပါ။
ကြက်သွန်နီ၊ အဖြူ တွေကိုအရွယ်ညီပါးပါးလေးတွေလှီးပါ...။
ဒယ်အိုးတစ်လုံးမှာဆီများများဖြင့် ကြက်သွန်နီ ၊ ဖြူတွေကို ကြွပ်နေအောင်
ပဲပုတ်တွေကိုလည်း..ကြွပ်အောင်ကြော်ပါ။ (သတိပြုရမှာက ပဲပုတ်ကြော်ချိန်
ပဲပုတ်၊ ၊ ကြက်သွန်နီ၊ ဖြူ ကြော်များထည့်ပြီး...သမအောင်မွှေပေးလိုက်ရင်..ပုံမှာပြထားသလို အဆင်ပြေပြေ.. ပဲပုတ်ငရုတ်သီးအကြွပ်ကြော်လေးရပါပြီ..။